अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा बाइडेन निश्चित – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा बाइडेन निश्चित – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा बाइडेन निश्चित
जो बाइडेन अमेरिकाको ४६ औँ राष्ट्रपति बन्ने निश्चित भएको छ । महत्वपूर्ण मानिएको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा वाइडनले जित हात पारेपछि उहाँलाई ह्वाइटहाउस पुग्न ढोका खुला भएको हो । बाइडनलाई ह्वाइट हाउसपुग्न चाहिने २७० इलेक्टोरल ल कलेज भोटको आँकडामध्ये उहाँले हालसम्म २ सय ९० पाउनुभएको छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडनले रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार तथा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्नुभएको हो । निर्वाचनको मतगणना क्रममा बाइडन केही महत्वपूर्ण निर्णायक राज्यमा पछाडि पारिनुभएको थियो ।
पेन्सिल्भेनिया, विस्कोन्सिन, मिशिगन र जर्जियाको नतिजा उल्ट्याउँदै बाइडेनले राष्ट्रपतिमा स्थान सुरक्षित गर्नुभएको हो । ट्रम्पले केही राज्यमा पुनः मतगणनाको माग गर्दै अदालती प्रक्रिया सुरु गरेको यसअघि नै जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।
अफ्रिकी–दक्षिण एशियाली मुलकी कमला ह्यारिस अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ जमैकन बाबु र भारतीय मुलकी आमाकी छोरी हुनुहुन्छ । डेमोक्रेटिकबाट जो बाइेडन राष्ट्रपति र कमला उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
उपराष्ट्रपति ह्यारिसले अब २० जनवरीबाट आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नुहुनेछ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २३ कार्तिक २०७७, आईतवार November 8, 2020 166 Viewed